Wasiir Cuuke oo Dib ugu Soo Laabtay Garowe – Radio Daljir
Seteembar 29, 2015 5:30 b 0
Talaado, September 29, 2015 (Daljir) —Wasiirka Caafimaadka Dowladda Puntland Dr Cabdinaasir Cismaan Ciise Cuuke iyo xubno katirsan wasaaradda oo uu kamid yahay Agaasimaha guud ee wasaaradda Caafimaadka dr Cabdirisaaq Xirsi Xasan ayaa dib ugu soo laabtay Garowe, waxayna kasoo qayb galeen shir looga hadlayey caafimaadka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Waxaa uu sheegay Wasiirku in wasaaradu ay leedahay barnaamij Caafimaad oo lagu magacaabo Caafimaadka Puntland,waxaa uuna tilmaamay in dhawaan ay uyimaadaan qolyo qiimayn ku samaynayey barnaamijka oo hada xiligiisu dhamaanayo.
Cowke ayaa sheegay in baahiyaha jira ay uqorteen qolyahaas iyo sida ay ukala hormarsanayaan baahiyaha,isagoo tilmaamay in Soomaaliya oo dhan laga sameeyey qiimaynta.
Wasiirka ayaa tilmaamay qiimaynta laga sameeyey dalka in lala wadaagayey beesha Caalamka, waxaa uuna tilmaamay in madaxdii Soomaalida ee shirka ka qayb gashay hadalo ku aadan baahiyahooda ka jeediyeen,maadaama uu dhamaanayo Barnaamijku.
Waxaa uu sheegay wasiirku in wasaaradda Caafimaadka Puntland ay xooga saartay sidii caafimaadka asaasiga ah loo gaarsiin lahaa meelaha ka fog laamiga sida Tuulooyinka iyo Miyiga.
Shirka waxaa soo qaban qaabisay Ha’yadda Caafimaadka Adduunka ee WHO,waxaana ka qayb galay waxaa iyana ka qayb galay qaar kamid ah deeq bixiyayaasha caafimaadak sida USA,UK, Findland, Sweden iyo Switzerland.